February 8, 2020 – ျမန္မာသတင္းစံု
ပျောက်သွားတဲ့ဖုန်းကို ကောက်ရသူက ကတ်လဲသုံးနေရင်တောင် ဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတာ သိနိုင်ပါပြီ
ပျောက်သွားတဲ့ ဖုန်း ကို ကောက်ရသူက ကတ်လဲသုံးနေရင်တောင် ဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတာ သိနိုင်ပါပြီ ပျောက်သူများအတွက်ပါ ။ လူကြီးမင်းတို့၏ ဖုန်း ပျောက်ဆုံးခဲ့လျှင် ပြန်ရှာဖို့ ခက်ခဲ မှာပါ ကောက်ရသူကလဲ ဆင်းကဒ် က အသုံးမဝင်ပေမဲ့ တန်ဘိုးရှိတဲ့ ဟန်းဆက်ကိုတော့ ပြန်မပေးပဲ ဆင်းကဒ် လဲပြီး အသုံးပြုတတ် ပါတယ်..။ အဲဒီလို အသုံးပြုနေခဲ့လျှင် လူကြီးမင်း ၏ ဖုန်း ဘယ်နေရာမှာ ရှိနေလဲ ဆိုတာ သိအောင် ဖုန်း မပျောက်ဆုံးမှီ အောက်ပါ အစီအစဉ် အတိုင်း Read more
သံသရာအဆက်ဆက် ဝဋ်ေကႊးကုန်လို့ ပြန်ဆုံတဲ့အခါ အမေဝမ်းထဲက အေမ့ရဲ့ သားေလးတဈေယာက်အဖြဈသားပြန်လာပါရေစ
ေက်နပ္တယ္ အေမ သား….ေက်နပ္တယ္ ေလာကအလယ္မွာ အေမရဲ့သားေလးအျဖစ္ျဖစ္ခြင့္ရခဲ့လို့ ….. ေလာကႀကီးက မ်က္ႏွာသာမေပးေတာ့ အေမဆိုေသာ …. အေမတစ္ေယာက္နဲ႔ အတူရွင္သန္ခြင့္မရတာကိုေတာ့သားဝမ္းနည္းမိတယ္ ….. မငိုပါနဲ႔ အေမ သားလာလမ္းကို အေမမွန္းဆၿပီးလြမ္းေနပါ ေနာက္ေႏွာင္ ဘဝအဆက္ဆက္ …… သံသရာအဆက္ဆက္ ဝဋ္ေၾကြးကုန္လို့ ျပန္ဆုံတဲ့အခါ အေမဝမ္းထဲက အေမ့ရဲ့ သားေလးတစ္ေယာက္အျဖစ္သားျပန္လာပါရေစ … အခု့ေတာ့ ……အခု့ေတာ့ အေမ သားကိုသြားခြင့္ျပဳပါဦး…. အေမ သက္ေက်ာ္ရာေက်ာ္ရွည္ပါေစ ….။ေျမာက္ဦးသားေရႊညာေျမ ကိသာေဂါတမီ …. ခ်စ္လွစြာေသာ သားဦး ရတနာေလးေရာဂါ တစ္ခုေၾကာင့္ Read more
ကြၽန္ေတာ့္ရဲ့ခ်န္ပီယံခါးပတ္ကိုစိန္ေခၚႏိုင္ဖို႔အတြက္ယွဉ္ၿပိဳင္ ထိုးသတ္ရတဲ့အေရးႀကီးတဲ့ပြဲစဉ္မွာအႏိုင္ရရိွသြားတဲ့ Reiner ကိုဂုဏ္ျပဳပါတယ္။သိပ္မၾကာခင္အခ်ိန္မွာခ်န္ပီယံခါးပတ္အတြက္ ၿပိဳင္ပြဲႀကိဳးဝိုင္းမွာရင္ဆိုင္ထိုးသတ္ဖို႔အတြက္ေမ်ွာ္လင့္ပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ့္ရဲ့ခ်န္ပီယံခါးပတ္ကိုစိန္ေခၚႏိုင္ဖို႔အတြက္ယွဉ္ၿပိဳင္ ထိုးသတ္ရတဲ့အေရးႀကီးတဲ့ပြဲစဉ္မွာအႏိုင္ရရိွသြားတဲ့ Reiner ကိုဂုဏ္ျပဳပါတယ္။သိပ္မၾကာခင္အခ်ိန္မွာခ်န္ပီယံခါးပတ္အတြက္ ၿပိဳင္ပြဲႀကိဳးဝိုင္းမွာရင္ဆိုင္ထိုးသတ္ဖို႔အတြက္ေမ်ွာ္လင့္ပါတယ္။ @sanfordmma #ANDSTILL #SanfordMMA Congratulations to Reiner for winning the title shot against myself. I hope to see you very soon across from me in the circle @onechampionship @sanfordmma #ANDSTILL #SanfordMMA Crd : AUNG La Nsang
2020မွာျမန္မာျပည္ႀကီး ေအးခ်မ္းမည့္ ေအာင္အတိတ္ ေအာင္နမိတ္ပါ။ 🙏🙏🙏 ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး ေရာင္ခ်ည္ေတာ္ ကြန႔္ျမဴးပါတယ္ (အျပည့္အစုံဖတ္နိုင္ရန္ ပုံကိုႏွိပ္ပါ)
မေန႔ညက ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး ေရာင္ခ်ည္ေတာ္ ကြန႔္ျမဴးပါတယ္၊2020မွာျမန္မာျပည္ႀကီးအတြက္ ေအးခ်မ္းတဲ့ ေအာင္အတိတ္ ေအာင္နမိတ္ပါ ဘုရားေလးဆူတို႔၏ ေမြေတာ္ ဓာတ္ေတာ္မ်ား ဌာပနာရာ ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေလးဆူ ဓာတ္ပံု ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးဟူ၍ ေခၚေဝၚၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကမာၻေပၚရွိ အျမင့္ဆံုး ဘုရားေစတီမွာ ၃၂၆-ေပ ရွိေသာ ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္ပင္ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ သိဂၤုတၱရ ကုန္းေတာ္ေပၚတြင္ တည္ရွိသည္။ ​ေလးဆူဓာတ္ပံု ေရႊတိဂံု ဟုလည္း ေခၚတြင္သည္။ ေစတီအစ ေရႊတိဂံုက ဟုဆိုၾကသည္။ မေန႔ညက ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး ေရာင္ခ်ည္ေတာ္ ကြန႔္ျမဴးပါတယ္၊ Read more
Mask တပ္ဆင္နည္းအမွားေတြပ်ံ့ႏွံ႕ေနလို႔ တကယ့္ Mask တပ္နည္းအစစ္ကဒီမွာပါ
Mask တပ်ဆင်နည်းအမှားတွေပျံ့နှံ့နေလို့ တကယ့် Mask တပ်နည်းအစစ်ကဒီမှာပါ ကျွန်တော်တို့ဟာ အအေးမိတဲ့အခါပဲ ဖြစ်ဖြစ် အနံ့ပြင်းတဲ့ အိမ်သုတ်ဆေးလိုဟာမျိုးကိုလုပ်ကိုင်ရမယ့် အခါမျိုးမှာဖြစ်ဖြစ် အနံ့ဆိုးတွေကို မရှူရှိူက်မိအောင် ၊ ဒါမှမဟုတ် လေထဲက ကူးစက်ရောဂါတွေကို မရှူရှိူက်မိစေဖို့အတွက် လမ်းဘေးဆေးဆိုင်ကနေ တစ်ခါသုံး Mask တွေကို တပ်ဆင်ကြပါတယ်။ ဒီလို တပ်ဆင်တာဟာ နည်းလမ်းမှန်လား ၊ မှားလားဆိုတာတော့ အားလုံး မသိကြပါဘူး။ နားရွက်မှာ ကြိုးနှစ်ချောင်းချိန်လိုက်ရုံဖြင့် ရောဂါပိုးတွေကို ကာကွယ်နိင်ပြီလို့ ထင်ရင်တော့ မှားကြမှာပါ။ အရာအရာတိုင်းမှာ နည်းလမ်းတွေ စည်းကမ်းတွေ ရှိသလိုMask Read more
မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးပါ ဖူးရခဲပါတယ္ ” လိုရာဆုကို ေတာင္းၿပီး ပို႔စ္ကို ရွဲလိုက္ပါ
မိုင်းဖုန်းဆရာတော် ဘုရားကြီးပါ ဖူးရခဲပါတယ် ” လိုရာဆုကို တောင်းပြီး ပို့စ်ကို ရှဲလိုက်ပါ…. မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးပါ ဖူးရခဲပါတယ်လိုရာဆုကို တောင်းပြီး ပို့စ်ကို ရှဲလိုက်ပါ ၇ရက်အတွင်း အကျိုးပေးလိမ့်မည် မယုံသူများကျော်သွားပါမစော်ကားပါနဲ့ရှင့်…. မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးပါ ဖူးရခဲပါတယ်လိုရာဆုကို တောင်းပြီး ပို့စ်ကို ရှဲလိုက်ပါ ၇ရက်အတွင်း အကျိုးပေးလိမ့်မည် မယုံသူများကျော်သွားပါမစော်ကားပါနဲ့ရှင့်…. မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးပါ ဖူးရခဲပါတယ်လိုရာဆုကို တောင်းပြီး ပို့စ်ကို ရှဲလိုက်ပါ ၇ရက်အတွင်း အကျိုးပေးလိမ့်မည် မယုံသူများကျော်သွားပါမစော်ကားပါနဲ့ရှင့်…. မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးပါ ဖူးရခဲပါတယ်လိုရာဆုကို တောင်းပြီး ပို့စ်ကို ရှဲလိုက်ပါ ၇ရက်အတွင်း အကျိုးပေးလိမ့်မည် မယုံသူများကျော်သွားပါမစော်ကားပါနဲ့ရှင့်…. Read more
မယုံမရှိနဲ့ မေတ္တာပို့ပြီးသာ သစ္စာဆိုလိုက်ပါ သစ္စာဆိုပြီးတော့ မေတ္တာပွားတဲ့နည်း အဲဒီဂါထာ (၃)ပုဒ်က ရတနသုတ်မှာ ပါပြီးသား။ သစ္စာဆိုတာ ဖြစ်တယ်။ လောကမှာ …သစ္စာဟာ အစွမ်းတန်ခိုး အင်မတန်မှ ထက်တယ်။ လူတွေက သစ္စာဆိုမှု အင်မတန်မှ နည်းကြတယ်။ တကယ် ကိုယ့်ဟာကိုယ် သစ္စာဆိုပြီးတော့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အရာတစ်ခုကို တောင်းလို့ ရှိရင် သစ္စာရဲ့စွမ်းအားဟာ ရှိတယ်။ မယုံရင်တော့ လုပ်ကြည့်ပေါ့။ တစ်ခါတည်းနဲ့တော့ ရချင်မှ ရမှာပေါ့။ ဘာဖြစ်လို့တုန်းဆိုတော့ သစ္စာစကားဟာ မှန်ကန်ဖို့လဲ လိုအပ်တယ်။ မှန်မှန်ကန်ကန်လဲ ဆိုရမယ်။ Read more
က်ိဳက္ထီးရိုး ဘုရား အနီးကပ္ ဖူးေမွ်ာ္ရေစဖို႔ အေဝးေရာက္ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားအတြက္ Share လုပ္ေပးပါအုန္
ကျိုက်ထီးရိုး စေတီတော်မြတ်ကြီးအား အနီးကပ် ဖူးမျှှော်ရန် တင်ပြပေးလိုက်ပါသည် … သာဓူခေါ်ကျပါ ။ အဝေးရောက် ညီအစ်ကိုမောင်နှမများအတွက် Share လုပ်ပေးပါအုန်း ကျိုက်ထီးရိုး စေတီတော်မြတ်ကြီးအား အနီးကပ် ဖူးမျှှော်ရန် တင်ပြပေးလိုက်ပါသည် … သာဓူခေါ်ကျပါ ။ အဝေးရောက် ညီအစ်ကိုမောင်နှမများအတွက် Share လုပ်ပေးပါအုန်း ကျိုက်ထီးရိုး စေတီတော်မြတ်ကြီးအား အနီးကပ် ဖူးမျှှော်ရန် တင်ပြပေးလိုက်ပါသည် … သာဓူခေါ်ကျပါ ။ အဝေးရောက် ညီအစ်ကိုမောင်နှမများအတွက် Share လုပ်ပေးပါအုန်း ကျိုက်ထီးရိုး စေတီတော်မြတ်ကြီးအား အနီးကပ် ဖူးမျှှော်ရန် Read more
တစ္သက္မွာတစ္ခါ ဖူးေမွ်ာ္ရခဲ ေ႐ႊတိဂုံေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ ေျမေအာက္႒ာပနာမ်ာ
တစ်သက်မှာတစ်ခါ ဖူးရခဲတဲ့ ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီး၏ မြေအောက်ဋ္ဌာပနာများ ဋ္ဌာပနာတော်တိုက်အတွင်းပိုင် ၆၆ပေ အမြင့်ရှိပီးခမ်နားထည်ဝါစွာတည်ဆောက်ထားခြင်း။ ၁၀ပေ ပတ်လည်ရေတွင်နှင့် ပြဿဒ်၅ခုပါ ကရဝိတ်ဖောင်တော်။ ကကုသန်မြတ်စွာဘုရားတောင်ဝှေးတော် ကောဏဂုံမြတ်စွာဘုရာရဲ့ဓမ္မကရိုက်ရေစစ်တော် ကဿပမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရေသနုပ် သင်္ကန်းတော် ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရဲ့ ဆံတော်၈ဆူ ဒါကြောင့် လေးဆူဓာတ်ပုံ ရွှေတိဂုံ လို့ဆိုကြသည်။ ဋ္ဌာပနာတော်တိုက်မှာပင်မအလယ်တိုင်မပါ သံရက်မမရှိပဲကျောက်တုံးကျောက်ခဲများဖြင့်ခန်းနားစွာတည်ဆောက်ထားခြင်း။ ဖောင်တော်မှာအလျား၆ပေခွဲခန့်အတိုင်းတာရှိ ရွှေအစစ်ချထားခြင်း။ ဋ္ဌာပနာတော်တိုက် မုဉ်ဦးအတွင်းပိုင်းဥက္ကလာမင်းရုပ်ထုနှင့်စလွယ်တော် တဖုဿ ဘလ္လိကညီနောင် သာသနာတော်စောင့်နတ်မင်းကြီးလေးပါးနှင့် နတ်ဒေဝါများပူဇော်နေဟန် ရွှေရုပ်ထုများထုလုပ်ထားခြင်း။ ၁၈၂၀ ဝန်ကျင်ခန့်က လူစွမ်းကောင်း မောင်ကံသည်ဆံတော်တွင်းမှမြတ်ဗုဒ္ဓဆံတော်အစစ်ကို တရုတ်ပြည်ကောက်ကွန်ဥတည်မက်းထံသို့ပင့်ရန် ဆံတော်အတွင်းသို့ဝင်ရာတွင်ရင်ဘတ်ထိတိုင် ကျောက်ရုပ်ဖြစ်သွားခဲ့သည်။ ၁၈၁၄ခုနှစ်တွင်းအဂ်လိပ်စစ်တပ်များဋ္ဌာပနာတိုက်ဖောက်၍အဖိုးတန်ရတနာများယူကြသည် ဆံတော်တွင်းဋ္ဌာပနာတိုက်အားအကြိမ်၂ဖောက်ခဲ့သော်လည်း Read more
ဖူးေျမာ္ထိုက္မွ ဖူးေျမာ္ခြင့္ရတဲ့. က်ိဳက္ထီးရိုး ဆံေတာ္ရွင္ အနီးကပ္ ထီးေတာ္.. မွ်ေဝကုသိုလ္ ယူနိုင္ၾကပါေစ…
ရှားရှားပါးပါး ဖူးမြှော်ထိုက်မှ ဖူးမြှော်ခွင့်ရတဲ့.. ကျိုက်ထီးရိုးဘုရား ထီးတော် အနီးကပ် မြင်ကွင်း.. မျှဝေကုသိုလ် ယူနိုင်ကြပါစေ… လက်ဆင့်ကမ်းမျှဝေပေးပါ ရှားရှားပါးပါး ဖူးမြှော်ထိုက်မှ ဖူးမြှော်ခွင့်ရတဲ့.. ကျိုက်ထီးရိုးဘုရား ထီးတော် အနီးကပ် မြင်ကွင်း.. မျှဝေကုသိုလ် ယူနိုင်ကြပါစေ… လက်ဆင့်ကမ်းမျှဝေပေးပါ ရှားရှားပါးပါး ဖူးမြှော်ထိုက်မှ ဖူးမြှော်ခွင့်ရတဲ့.. ကျိုက်ထီးရိုးဘုရား ထီးတော် အနီးကပ် မြင်ကွင်း.. မျှဝေကုသိုလ် ယူနိုင်ကြပါစေ… လက်ဆင့်ကမ်းမျှဝေပေးပါ ရှားရှားပါးပါး ဖူးမြှော်ထိုက်မှ ဖူးမြှော်ခွင့်ရတဲ့.. ကျိုက်ထီးရိုးဘုရား ထီးတော် အနီးကပ် မြင်ကွင်း.. မျှဝေကုသိုလ် ယူနိုင်ကြပါစေ… လက်ဆင့်ကမ်းမျှဝေပေးပါ